Feral Inopindirana ichaunza Shadow yeTomb Raider kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kurume apfuura, Feral Interactive yakaunza mutambo weDiRT 4 kuLinux. Kutenda kukambani yeBritish, vashandisi vanoshandisa sisitimu inoshanda iyo kernel inogadzirwa naLinus Torvalds vanogona kunakidzwa nemutambo wakanaka weRally, asi yakanga isiri yekutanga uye ichave isiri yekupedzisira nguva yaakaita zvakafanana. Muchokwadi, mashoma mashoma apfuura Yakazivisa kuti achazviita zvakare, ino nguva ine zita rine chekuita naLara Croft.
Musoro wakasarudzwa panguva ino ndi Mumvuri PAGUVA Raider, kunyanya iyo Definitive Edition, zita rave kuwanikwa kweinoti pfuurei gore pane mamwe mapuratifomu akadai sePlayStation, Xbox kana Windows. Kufanana neTomb Raider yese, chiito, chakavanzika uye mutambo wepuzzle, asi usafunge kuti ndezvekubatanidza zvidimbu kugadzira mifananidzo. Iwo mapuzzle mune aya marudzi emitambo anoreva kuti isu tinofanirwa kuongorora maitiro ekuita zvinhu kuti tirambe tichifambira mberi mumutambo.
Feral Inopindirana inoendesa ichangoburwa Tomb Raider kune macOS uye Linux
Muchiitiko chinobata chakazara nezvakavanzika uye kutyisidzira, Lara Croft anofanirwa kununura nyika kubva kuna Mayan apocalypse uye azvigadzire iye muguva gomba iye akafanirwa kuve. Kubatanidza mutambo wepazasi, ese manomwe anodenha makuva eDLC, pamwe nezvombo zvese zvinokanganwa, zvipfeko, uye kugona, Shadow yeTomb Raider Definitive Edition ndiyo nzira yakanakisa yekusangana nenguva yaLara.
Pamusoro pevhidhiyo iri pamusoro, Feral Interactive zvakare yakatumira chinongedzo mavari tinogona kuona mimwe mifananidzo yemusoro wenyaya. Iyo Definitive Edition ichapa chiitiko chakazara, nekuti inosanganisira iyo yese DLC muunganidzwa. Mutambo uchave uripo kune Linux uye macOS kubva inotevera November 5 kuburikidza chiutsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Feral Inopindirana inozviita zvakare: Mumvuri weTomb Raider iri kuuya kuLinux munaNovember 5